ချစ်တင်းနှောခြင်းက သင့်ကျန်းမာရေးကို ဘယ်လို အထောက်အကူ ဖြစ်စေနိုင်သလည်း ? | Buzzy
ချစ်တင်းနှောခြင်းက သင့်ကျန်းမာရေးကို ဘယ်လို အထောက်အကူ ဖြစ်စေနိုင်သလည်း ?
တန်ဆေးလွန်ဘေးမို့ ဘယ်လို အထောက်အကူဖြစ်တယ် ၊ အထောက်အကူ ဖြစ်အောင် ဘယ်လိုနေရမလည်း ဆိုတာ ဒီမှာလေ့လာနိုင်ပါတယ်။
ဇနီးမောင်နှံတွေအတွက် အိမ်ထောင်ရေး သာယာဖို့ဆိုတာမှာ ချစ်တင်းနှောခြင်းဟာလည်း အရေးကြီးတဲ့ အခန်းကနေ ပါဝင်ပါတယ် ။ ချစ်တင်းနှောခြင်းဟာ သင့်အိမ်ထောင်ရေးကို ပိုမိုသာယာစေသလို ကျန်းမာရေးအတွက် ကောင်းကျိုးပြုတဲ့ အချက်တွေလည်း ရှိနေပါတယ်။
ဇနီးမောငျနှံတှအေတှကျ အိမျထောငျရေး သာယာဖို့ဆိုတာမှာ ခဈြတငျးနှောခွငျးဟာလညျး အရေးကွီးတဲ့ အခနျးကနေ ပါဝငျပါတယျ ။ ခဈြတငျးနှောခွငျးဟာ သငျ့အိမျထောငျရေးကို ပိုမိုသာယာစသေလို ကနျြးမာရေးအတှကျ ကောငျးကြိုးပွုတဲ့ အခကျြတှလေညျး ရှိနပေါတယျ။
ချစ်တင်းနှောခြင်းက သင့်နှလုံးကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေပါတယ်။ တစ်ပတ်ကို နှစ်ကြိမ်အထက် ချစ်တင်းနှောပေးခြင်းဖြင့် အမျိုးသားတွေအတွက် နှလုံးထိခိုက်နိုင်မှုကို လျှော့ပါးစေနိုင်ပါတယ်။
ခဈြတငျးနှောခွငျးက သငျ့နှလုံးကို ပိုမိုကောငျးမှနျစပေါတယျ။ တဈပတျကို နှဈကွိမျအထကျ ခဈြတငျးနှောပေးခွငျးဖွငျ့ အမြိုးသားတှအေတှကျ နှလုံးထိခိုကျနျိုငျမှုကို လြှော့ပါးစနေိုငျပါတယျ။
ချစ်တင်းနှောခြင်းဟာ နာကျင်မှု ဝေဒနာတွေကိုလည်း သက်သာစေပါတယ် ချစ်တင်းနှောနေချိန်မှာ oxytocin ဟော်မုန်း ငါးဆထိ မြင့်တက်လာစေတာမို့ ခေါင်းကိုက်တာ ၊ ကိုယ်လက်နာကျင်တာတွေကို လျှော့ပါးသက်သာစေနိုင်ပါတယ်။
ခဈြတငျးနှောခွငျးဟာ နာကငျြမှု ဝဒေနာတှကေိုလညျး သကျသာစပေါတယျ ခဈြတငျးနှောနခြေိနျမှာ oxytocin ဟျောမုနျး ငါးဆထိ မွငျ့တကျလာစတောမို့ ခေါငျးကိုကျတာ ၊ ကိုယျလကျနာကငျြတာတှကေို လြှော့ပါးသကျသာစနေိုငျပါတယျ။
ချစ်တင်းနှောခြင်းဖြင့် စိတ်ဖိစီးမှုကို လျှော့ကျစေတဲ့ ဟော်မုန်းတွေ ထွက်ရှိလာပြီး ကြွက်သားတွေကိုလည်း ပြေလျှော့စေကာ ကောင်းမွန်စွာ အိပ်ပျော်စေနိုင်ပါတယ်။
ခဈြတငျးနှောခွငျးဖွငျ့ စိတျဖိစီးမှုကို လြှော့ကစြတေဲ့ ဟျောမုနျးတှေ ထှကျရှိလာပွီး ကွှကျသားတှကေိုလညျး ပွလြှေော့စကော ကောငျးမှနျစှာ အိပျပြျောစနေိုငျပါတယျ။
ဒါ့အပြင် ချစ်တင်းနှောစဉ်မှာ ထွက်တဲ့ ဟော်မုန်းတစ်မျိုးဟာ ကိုယ်ခန္တာရဲ. ခုခံအားစနစ်ကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်ပြီး ခန္တာကိုယ်ထဲက တစ်ရှုးတွေ ပျက်ဆီးခြင်းကိုလည်း မဖြစ်အောင်လည်း ထိန်းသိမ်းပေးပါတယ် ။ နှလုံးခုန်မြန်စေတာမို့ သင့်ကျန်းမာရေးကို အထူးကောင်းမွန်စေမှာပါ။
ဒါ့အပွငျ ခဈြတငျးနှောစဉျမှာ ထှကျတဲ့ ဟျောမုနျးတဈမြိုးဟာ ကိုယျခန်တာရဲ. ခုခံအားစနဈကို မွှငျ့တငျပေးနိုငျပွီး ခန်တာကိုယျထဲက တဈရှုးတှေ ပကျြဆီးခွငျးကိုလညျး မဖွဈအောငျလညျး ထိနျးသိမျးပေးပါတယျ ။ နှလုံးခုနျမွနျစတောမို့ သငျ့ကနျြးမာရေးကို အထူးကောငျးမှနျစမှောပါ။
တစ်ပတ်လျှင် သုံးကြိမ်လောက် ချစ်တင်းနှောခြင်းဖြင့် သင်ဟာ နုပျိုမှုကိုလည်း ပိုင်ဆိုင်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ် ။ သွေးလှည့်ပတ်မှု ကောင်းမွန်စေတာမို့ အရေပြား ကျန်းမာရေးကို အထူးထိန်းသိမ်းပေးရာ ရောက်တာအမှန်ပါပဲ။
တဈပတျလြှငျ သုံးကွိမျလောကျ ခဈြတငျးနှောခွငျးဖွငျ့ သငျဟာ နုပြိုမှုကိုလညျး ပျိုငျဆိုငျနိုငျမှာ ဖွဈပါတယျ ။ သှေးလှညျ့ပတျမှု ကောငျးမှနျစတောမို့ အရပွေား ကနျြးမာရေးကို အထူးထိနျးသိမျးပေးရာ ရောကျတာအမှနျပါပဲ။
ည ဘက်မှာပွင့်တတ်တဲ့ လှပ ထူးဆန်း ပန်းပွင့်တွေ